Inhlangano yodokotela ihlongoza ugxa kuqala bengakalaphi – Bayede News
Kubonakala kuzosuka uthuli lweziChwe embonini
by Bayede-News Posted on 21 May 2019 21 June 2019
Bafuna izigulu ziqale zikhokhe ngephambi kokuthi zelashwe
Kubonakala kuzosuka uthuli lweziChwe embonini yezokwelapha kwelengabadi njengoba abesebenza ngokwelapha abazimele njengodokotela nabanye sebesungule inhlangano ezobalwela ikakhulukazi nezinkampani ezikhokhela izindleko zokwelashwa.
Laba basebenzi abazimele sebesungule inhlangano abayibiza ngeNational Health Practitioners ngenhloso yokulwa nabakubiza ngokuhlukunyezwa kwabo yilabo abaphathiswe yizinkampani ezikhokhela izindleko zokwelashwa.
Okuseqhulwini lwezinkonondo yindlela lezi zinkampani ezenza ngayo ucwaningomabhuku. “Ngosuku othola ngalo incwadi ekwazisa ngocwaningo kuvele kuthiwe kusukela namhlanje ngeke usakhokhelwa izimali ozikweletwayo. Ube usunikwa izinsuku ezinhlanu kuphela ukuthi ulethe amarekhodi eminyaka emibili”, kusho uMandisa Skhosana okhulumela iNHCPA.
“Lokhu akumniki lowo ophenywayo ithuba lokucela imvume ebhalwe phansi yeziguli zakhe ukuthi angadedela ulwazi ngazo.” USkhosana uqhube wathi lokho kwenza ukuthi bagcine sebephula imitheshwana yokuziphatha kwabo yakwaHealthcare Practitioners of South Africa elawula bonke abelaphayo ezweni futhi bagcina sebephula umthetho olawula ezokwelapha iNational Health Act.
Okunye abakhala ngakho laba belaphi ukuthi noma sebewahambisile amarekhodi afunekayo abakhokhelwa izimali abazikweletwayo. “Esikhundleni salokho kuvele kufike incwadi esho imali ekuthiwa uyikhwabanisile, kungavezwa nanokuthi kufinyelelwe kanjani kulelo nani.”
“Uma kwenzekile kwatholakala ukuthi umelaphi akanacala, akube kusabuyiswa nesenti leli, kuvele kufike incwadi ethi ‘sesiyithole yonke imali osikweleta yona’,” kusho u-Skhosana.
Ukukhwabanisa, ukumosha nokuxhashazwa kwemali yokukhokhela ukwelashwa yinkinga enkulu. Lokhu kubandakanya ukukhokhelwa ngokwelapha okungenzekanga, ukukhokhelwa kwezinto ezingenasidingo, nokunye.
ISigungu samaMedical Scheme esilawula ukusebenza kwezinkampani ezikhokhela ukwelashwa kweziguli sesize sabamba ingqungquthela ngalolu daba ngoNhlolanja nonyaka. Umonakalo owenziwa wukukhwabanisa, ukuxhashazwa nokumoshwa kwemali yokukhokhela ukwelashwa ulinganiselwa ezigidigidini zamarandi.
Ngokusho kukaSkhosana, iNHCPA ayiyethembi iCouncil for Medical Schemes njengoba kusanda kumiswa emsebenzini omunye wabasebenzi bayo ngezinsolo zenkohlakalo. Le nhlangano ihlela ukhukhulela ngoqo wenhlabaluhide ezolibhekisa kuDiscovery, kwaGems nakuMedscheme.
Kubonalakala lolu thuthuva luzochaphazela iziguli njengoba amalunga eHCPA esenqume ukuthi acele imali phambili ezigulini zawo ukuze agweme ukuwa kwamabhizinisi awo nokuncenga izinkampani ezikhokhela ukwelashwa kweziguli.
Izimo ezinjengalezi zikhombisa ukuphuthuma kohlelo lweNational Health Insurance. Ngesikhathi sokuloba uNgqongqoshe Wezempilo kuzwelonke uDkt u-Aaron Motsoaledi usebize umhlangano wokudingida lolu daba ngoLwesine (izolo).